ကြက်ကလေး တစ်ကောင်ကို စက်ဘီးနဲ့ တိုက်မိလို့ ဆေးရုံကို အပြေးလေး ရောက်လာတဲ့ ကလေး – AFM
By EditorPosted on November 20, 2019
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဆိုတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတာပါ…အဲဒီပြည်နယ်က ကလေးလေးတစ်ဦးရဲ့ တစ်ကယ့်ကို အကြင်နာတရားအပြည့်ရပုံက ကြားရသူတွေကို အံ့သြသွားစေရပါတယ်… အဲတာကတော့ ၆ နှစ်အရွယ်ကလေးက စက်ဘီးနဲ့ တိုက်မိတဲ့ကြက်ကလေးကို ယူပြီး ဆေးရုံကို ဆေးကုဖို့ ရူပီး ၁၀ နဲ့ အတူသွားပြတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါပဲ…
ဒီအကြောင်းကို အဲဒီဆေးရုံက သူနာပြုတစ်ဦးက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်တဲ့အခါ လူတွေအားလုံးက ကလေးလေးရဲ့ အကြင်နာတရားကို ဝိုင်းပြီး ချီးကျူးနေကြတာပါ….
ကလေးလေးရဲ့ နာမည်က Derek C. Lalchhanhima ဖြစ်ပြီး ဖခင်ကတော့ ရဲတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dhiraj Chhetri ဖြစ်ပါတယ်…သူ့အဖေက ပြောပြရာမှာတော့ ကလေးလေးက သူတိုက်မိတဲ့ ကြက်ကလေးကို အိမ်ယူလာပြီးတော့ ဆေးရုံပြပေးဖို့ သူတို့ကို ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…အဲတာနဲ့ အဖေဖြစ်သူက ရူပီး ၁၀ ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်သွားပြဖို့ ဆေးရုံကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံကနေ အိမ်ပြန်လာပြီးတော့ ကြက်ကလေးကို မကုပေးလို့ ဆိုပြီး ငိုနေပါတယ်…အဲတာနဲ့ အဖေဖြစ်သူနဲ့ အမေဖြစ်သူက ကြက်လေးသေသွားလို့ ကူညီလို့ မရတော့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို သိသွားကြတဲ့ လူတွေက ကလေးလေးကို နှစ်သိမ့်အားပေးနေကြသလို ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ သူ့စိတ်လေးကို ဝိုင်းဝန်းချီးကျူးနေတာဖြစ်ပြီး ကလေးလေးကတော့ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာ နာမည်ကြီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကလေးလေးရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အကြင်နာတရားလေးကို သိရအောင်လို့ ခုလို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်…